I-Dream Apartment ene-pool kunye nembono yolwandle
Uthweswe isithsaba esitsha njengeSuperhost siya kwenza konke ukwenza okusesikweni kwimbasa yethu kwaye sikuqinisekise ngeeholide ezimnandi neziphumlayo. Ukujonga, i-terrace, ifulethi kunye nephuli ziyamangalisa-uya kuthanda uxolo, ukuzola kunye nokhuseleko kwaye ukonwabele ukujonga elwandle kunye nokutshona kwelanga.
Le ndlu inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ibhedi enkulu kunye nebhedi eyongeziweyo, igumbi lokuhlambela loyilo kunye nethafa elikhulu eligqunyiweyo elinokufikelela kwiphuli enkulu. Uya kuyithanda!
Inyuswe kancinci ekupheleni kwendlela yabucala le ndlu ibonelela ngabucala ngokupheleleyo ngaphandle kwetrafikhi kunye nokungena. Le ndlu inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala / igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela labayili, ithala eligqunyiweyo kunye nokufikelela kwidama elikhulu elinombono omangalisayo kuLwandlekazi lwePasifiki.
Ukuhlala kwi-terrace yakho unokubona izikhephe ezingenayo izikhephe, iilayini zokuhamba ngenqanawa kunye nezikhephe zesikhephe kunye nokutshona kwelanga okumangalisayo. Emva koko uya kulala ebhedini yakho enkulu njengasezulwini..,,
4.69 ·Izimvo eziyi-32